Vakawanda Vonetsekana neKudhura kweMishonga kuZvipatara
Vanhu vane zvirwere zvakaita seitsvo, shuga, gomarara nemoyo vanoti vakaona chitsvuku mugore ra 2016 vachiedza kuchengetedza hutano hwavo nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu munyika.
VaSimeon Jamanda vanorwara nechirwere cheitsvo huye vanoenda kuchipatara kaviri pasvondo. VaJamanda vanoti nekuwondomoka kwehupfumi munyika, hupenyu hwavo hwakavaomera zvikuru.
VaJamanda vanoti kurarama nechirwere ichi mutoro mukuru huye vanokumbira hurumende kuti iedze kubatsira vane zvirwere zvakaita sechavo zvinoda mishonga nguva nenguva.
Amai Maria Gombedza vane makore makumi mashanu nemapfumbamwe vanorwarawo nechirwere cheshuga vanoti dai pasina vana vavo deno vachinonga svosve nemumuromo sezvo mari yavanowana yemudyandigere irishoma shoma.
Amai Gombedza, avo vanogara muKariba, vanoti vanoda madhora anosvika mazana maviri pamwedzi woga woga ekutenga mishonga pamwe nemajekiseni anovararamisa.
Masangano anomirira vanorarama nezvirwere zvakasiyana siyana vanoti kuve nechirwere munyika munyama mukuru. Vanoti nhengo dzavo zhinji dziri kununga svosve nemuromo mukuedza kuchengetedza hutano.
Munyori mukuru musangano reDiabetic Association, VaChristopher Sambo, huye vachiraramawo nechirwere cheshuga vanoti matambudziko avo gore rino akazowedzerwa nekushaikwa kwemari mumabhanga. Vanoti nhengo dzavo zhinji kusanganisira ivo vari kutatarika kutenga mishonga inodiwa kunyanya kwevave pamudyandigere.
VaSambo vanoti shuviro yavo kubatsirwa kwenhengo dzavo nehurumende.
Munyori musangano re Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Evans Masitara, vanoti kunyange hazvo kodzero yehutano iri mubumbiro, varombo kunyanya vanonoonekwa mwedzi nemwedzi kuzvipatara, havasi kukwanisa kuchengetedza hutano.
VaMasitara vanotiwo kutadza kubatsirwa kwekambani yehurumende inogatsira mapiritsi nemishonga yeNatpharm kwoita kuti mitengo yazvo ive pamusorosoro.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzeruzhinji, Muzvare Belinda Chinowawa, vanoti kusvika hurumende yave kuisa mari ine tsarukano kubazi rezveutano mukuchengetedzwa zvakanaka kwevana , kodzero yehutano icharamba iri zviroto.
Pari zvino hurumende iri kubatsira vamwe vane chirwere cheHIV/AIDS chete huye vashandi vanobatirwa mari dzeAIDS levy asi hapana mari yekubatsira zvimwe zvirwere zvakutouraya vanhu vakawanda zvakaita seshuga negomarara.
Mubhajeti regore rinouya gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vari kuronga kuumba homwe yezveutano inonzi Health Levy Fund asi hazvisati zvava pachena kuti mari iyi ichange ichibatsira vane zvirwere zvipi.